Qt 5.10: yakaburitswa neQt 3D Studio Edhi uye zvimwe zvinowedzera | Linux Vakapindwa muropa
Mumwe wevanogadzira The Qt Kambani, anonzi Lars Knoll, azivisa kuti iyo nyowani vhezheni yakavhurwa sosi yeprojekti Qt (pasi peGPL rezinesi) yave kuwanikwa kazhinji. Kunyanya, ndiyo vhezheni yacho qt 5.10 izvo zvinounza dzimwe nhau kuti ugone kugadzira mifananidzo yezvishandiso zvese zviri zviviri GNU / Linux, senge macOS, Android uye zvakare yeMicrosoft Windows. Uye yasvika mwedzi mitanhatu mushure mekupedzisira Qt 5.9 kuburitswa kwerutsigiro rwakawedzerwa, ndokuti LTS.
Nebazi idzva iri vakaunzwa shanduko dzakadzama uye kugadzirisa izvo zvicharamba zvichigadzirwa nekuvandudzwa mune ramangwana. Imwe yemhando yepamusoro uye yakakosha ndeyekuunzwa kweQt 3D Studio, grafiki mhariri iyo inokutendera iwe kuti ugadzire graphical mushandisi maficha kana GUI mumatatu matatu. Pasina kupokana shanduko hombe iyo vese vanogadzira avo vanoda kushandisa Qt sehwaro hweiyo graphical interfaces yeapplication vachakwanisa kunakidzwa nenzira yakapusa. Mukuwedzera Lars akasimbisa kuti Qt 3D Studio ichashandawo neQt 5.9 ...
Asi mupepeti uyu haazi iye oga matsva, kune mamwe akakosha senge iwo matsva mashandiro akabatanidzwa Qt Core uye Qt Widgets. Uye kwete izvo chete, senguva dzose panga painewo kunatsiridzwa kwekodhi uye kugadzirisa zvipenga kubva mushanduro dzakapfuura. Semuenzaniso, ikozvino tinogona kuwana plugin nyowani yeQt Kurumidza, uye zvimwe zvinhu zvitsva kuenzanisira edu magiraidhi nyore neinonakidza Qt chirongwa. Qt Kurumidza Kudzora 2 yakagamuchirawo maviri matsva matsva, Fungidzira uye Fusion, mukuwedzera kune dzimwe shanduko kubhawa yemenu uye zvimwe zvishandiso.
Imwe plugin nyowani ndeye QPA nerutsigiro rutsigiro uye runyorwa rurefu rwekuchinja kukuru. Ehe uchaiwana mu mitauro yakasiyana-siyana. Kana iwe uchifarira kurodha mabhainari eprojekti uye wotanga kuashandisa, unogona kuzviita kubva Iyi link kwaunowana Qt 5.10 uye iwe unogona zvakare kuwana iyo IDE Qt Musiki kubva iyi imwe link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Qt 5.10 - Yakaburitswa neQt 3D Studio Edhi uye nezvimwe zvinowedzera